Penguine Isle သည်သင်၏မိုဘိုင်းပေါ်တွင်နေထိုင်ရန်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည် Androidsis
Penguins ကျွန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစင်ကြယ်သောအပန်းဖြေမှုသို့ခေါ်ဆောင်သွားမည့် Simulator အသစ်ဖြစ်သည် ပင်ဂွင်းငှက်များကြီးထွားလာပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်ဂွင်းငှက်များအတွက် "နေအိမ်" အဖြစ်အသုံးချမည့်ရေခဲစိုင်အအေးသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပို့ဆောင်သည့်အခြားမည်သည့်ခေါင်းစဉ်မဆိုခေါင်းစဉ်။
နှင့်အတူအခမဲ့ခေါင်းစဉ် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းပညာနှင့်အမြင်အာရုံအဆင့်။ အမှန်တရားမှာပင်ဂွင်းငှက်များသည်ရေခဲတောင်များကြားမည်ကဲ့သို့ရွေ့လျားနေသည်ကိုသူတို့မြင်တွေ့ရ။ ၀ မ်းသာစရာကောင်းသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့်၎င်းတို့အားပိုမိုငါးဖမ်းခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကြီးမားသောရေခဲတုံးကြီးကိုကိုင်တွယ်ခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ "အဆောက်အအုံများ" ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ရခြင်းကပျော်ရွှင်စရာဖြစ်သည်။
3 Penguins ကျွန်းသည်အလွန်ပျင်းရိသည်
ကြီးမားသောကျေနပ်မှုရစေသောအရာတစ်ခုခုရှိပါက၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် ပင်ဂွင်းငှက်များသည်ရေခဲတောင်တစ်ခုသို့ရွေ့လျားနေသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် သူတို့အိမ်မှာကဲ့သို့သူတို့နေထိုင်ကြသည်။ အနားယူသောဂီတနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံထိတွေ့မှုတို့ဖြင့် Penguins Isle သည်အခြားမည်သည့်ဂိမ်းနှင့်မျှမတူပါ။
သင်သည်ကျွန်းသို့ပင်ဂွင်းငှက်များယူဆောင်လာပြီး ၀ င်ငွေရရန်အလုပ်အကိုင်များပေးသောကြောင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုကျွေးမွေးနိုင်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တကယ်အကြောင်းပြောဆို ကလစ်သို့မဟုတ်ပျင်းရိဂိမ်း ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်၊ ပြီးတော့ပင်ဂွင်းငှက်အမြောက်အများနဲ့အတူပိုကြီးမားတဲ့ရေခဲတောင်ငယ်ကြီးဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမယ်။
Penguins ကျွန်းသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဝေလငါးရိုက်ခတ်မှုနှင့်ရုတ်တရက်နက်နဲရာမှကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်စေသည့်အချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်သွားနိုင်သည်။ ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသောကြီးမားတဲ့ပေါ်ထွက်လာ။ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပြီး၎င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဆိုငါတို့ကရေခဲတောင်ကိုရောက်တဲ့ပင်ဂွင်းငှက်အသစ်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးသလိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ် ငါးဖမ်းခြင်းကိုဂရုစိုက်ပါ။ အခြားပျင်းရိစရာဂိမ်းများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သူတို့၏စက်ရုံများကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်။
ဂိမ်းကစားခြင်းသည်တော်တော်လေးရိုးရှင်းပြီးနေရင်းထိုင်ခုံအသစ်အတွက်ငွေအလုံအလောက်စုဆောင်းရန်အတွက်ပင်ဂွင်းများစွာကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ပိုကောင်းတဲ့ပင်ဂွင်းတွေရလိမ့်မယ် ပြီးတော့အေးခဲတဲ့ကမ္ဘာမှာချမ်းသာဖို့ပိုက်ဆံသိပ်မများနိုင်ဘူး၊
ဒါတွေအားလုံးကိုမင်းလုပ်နိုင်တဲ့အရာနဲ့အတူ အကောင်းဆုံးရှုထောင့်ရဖို့ကင်မရာကိုရွှေ့ပါ သင်၏ပင်ဂွင်းငှက်များနှင့်ဤအားပျော့ပျောင်းသော Simulator ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်ရေအေးမြ။ စိတ်အေးအေးထားသည့်ပုံများဖြင့်သင့်ကိုနှစ်သိမ့်သည်။ အမှန်တရားကတော့ Penguins ကျွန်းပေါ်မှာလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
ကျနော်တို့ခံစားချက်နှင့်အတူကျန်ကြွင်းသောအရာကိုအတူကျနော်တို့ကထူးခြားတဲ့ဂိမ်းကစား နှင့်ငါတို့ freemium နှင့်အတူစိတ်ပျက်အားငယ်ဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာပင်ဂွင်းငှက်များသည်သင်လိုအပ်သောတိုးတက်မှုများ၌မည်သို့သုံးစွဲရမည်ကိုလေ့လာရန်ငွေအမြောက်အမြားနှင့်ပိုက်ဆံအလုံအလောက်ရရှိရန်သင်ခဏတဖြုတ်ပစ္စည်းများစွာရနိုင်လိမ့်မည်။ နက်နဲရာမှထွက်လာသောကြီးမားသောဝေလငါးကိုသင်မလွတ်စေရန်အကြံပေးလိုပါသည်၊
တစ်မူထူးခြားတဲ့ဂိမ်းနှင့် အမြင်အာရုံထက်ပိုပြီးထွက်ပေါ်လာသည်။ ဒီဂိမ်းမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုငါတို့မျက်စိအတွက်အမြင်အာရုံအပျော်အပါးဖြစ်စေရန်လုပ်ထားတယ်။ အာတိတ်တိရိစ္ဆာန်များ (ဝေလငါးနှင့်ပင်ဂွင်းငှက်များထက်ပိုမိုများပြားသည်) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာကိုနစ်မြုပ်ကာမျက်နှာပြင်ထက် ပို၍ မြင်လိုသောအခါမျက်နှာပြင်ပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်သောသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့ပင်။ သူ့ဟာသူထူးခြားသည့်ဂိမ်းတစ်ခုတွင်လုပ်ဆောင်စရာများစွာရှိကြောင်းပြသရန်လာသည့်ဂိမ်းတစ်ခု။
Penguine ကျွန်းသည်သင်၏ Android မိုဘိုင်းအတွက်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်သင်၌၎င်းကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရှိသည်။ သင် PUBG Mobile တွင်ဂိမ်းအနည်းငယ်ကစားပြီးနောက်စိတ်အေးအေးထားရန်လိုအပ်ပါက၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်စမ်းသပ်ရန်အချိန်ယူနေပြီဖြစ်သည်။ သငျသညျအရှိဆုံးစပ်စု၏အခြားပျင်းရိဂိမ်းချင်လျှင်, အာဏာရှင်စနစ် 3K.
အဆိုပါခြင်း simulation အတွက်ဖမ်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » သင်၏ပင်ဂွင်းကြီးများကိုကြီးပွားစေပြီး Penguin ကျွန်းကြီးပေါ်တွင်သူတို့၏နေရင်းဒေသများကိုဖန်တီးပါ
Jaime Melgar ဟုသူကပြောသည်
Jaime Melgar သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းသောကစားနည်းကောင်း၊ အနားယူပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်းငါသည်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်, အချိန်အပိုင်းအစကိုအသုံးပြုသည်? သူကဒီတာဝန်ကိုလုပ်ခိုင်းဖို့ကျွန်တော့်ကိုတောင်းဆိုကတည်းကအရာရာအသစ်တွေကိုဆက်ပြီးရှာဖွေလို့မရဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါနားလည်သောအရာမှ၎င်းသည် "အချိန်တိုကင်" ဖြစ်ပြီးဝယ်ယူထားသောကျောက်မျက် ၃၀ ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
"အချိန်တိုကင်" ကိုစတိုးဆိုင်၏အဆုံးတွင်တွေ့ရှိပြီး ၁ နာရီကြာ ၀ ယ်နိုင်သည်။
ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါ့အဘို့ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်မှာဒီမေးခွန်းအတူတူပါပဲ၊ ခင်ဗျားတို့အတွက်အဲဒါကိုဖြေရှင်းပြီးပြီ၊ ငါကဒီတာ ၀ န်ကို ၃ ရက်ကြာထမ်းဆောင်ခဲ့သည် ...
A. အ Gea
ငါ Xabi ကဲ့သို့တူညီသောသံသယရှိသည်, အချိန်အပိုင်းအစကိုအသုံးပြုသည်?
လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုပြီးစီးနိုင်မလဲ။ ရင်ဘတ် ၁ ခုကိုဖွင့်ပါ။
Ayudaaaa, ငါ့ပင်ဂွင်းငှက်တွေကငါ့ကိုရွှေငါးကိုရင်ဘတ်ပေါ်ခေါ်လာတယ်။ ဘာအတွက်လဲ။ ဒါမှမဟုတ်ရောင်းဖို့လား။ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုဖြေရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါဟာကူညီပေးသည်, ငါငွေကြေးအမျိုးအစားကိုနားမလည်။ ငါတောင်မှအန္တာတိကအခြေစိုက်စခန်းကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်, ဘယ်လိုပြုသလဲ? အဲ့ဒီအပြာရောင်ကွက်လပ်တွေထဲကတစ်ခုခုလား။ ငါငွေပမာဏဘယ်လောက်ချဉ်းကပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တကယ်မသိဘူး၊ ကစားတယ်၊ ကစားတယ်။ ဘာမှမရှိဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ: (((
သင်၏နားကြပ်ကို ၀ တ်ဆင်ပြီးနေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေရန်အခမဲ့ app တစ်ခုဖြစ်သည့် Music Zen နှင့်အတူအနားယူပါ